Orinasa mpamokatra masinina Sandblasting China - Puhua
Home > Products > Trano fanamoriana fasika > Milina mandrakizay
Sandblasting Machine dia be mpampiasa amin'ny sambo, tetezana, toeram-pitrandrahana, masinina, fantsom-pitrandrahana solika, vilanin-tsolika, fitaovana milina, lalamby, famokarana milina, fanamboarana seranan-tsambo, fitahirizana rano ary harafesina ambonin-tany hafa.
Sandblasting Machine no vokatra jet abrasive be mpampiasa indrindra, ny milina sandblasting dia mizara ho milina sandblasting maina sy milina fanapoahana rano sokajy roa, ny milina sandblasting maina dia azo zaraina amin'ny fofonaina sy ny tsindry amin'ilay karazany.
Fitaovana milina Sandblasting: fasika amoron-drano, fasika mavo, tifitra vy, grit, pilina notapahina, corundum, corundum, quartz, sns.
Fitaovana fanadiovana indostrialy Auto Portable / Sand Blaster / Sandblasting Equipment amidy dia fitaovana ilaina amin'ny hetsika fanoherana ny harafesin'ny traditonal, toy ny fanamboarana an-dranomasina, fanesorana ny fantson-drano sy ny vatan'ny tanky, fanavaozana ny fitoeran-javatra sns.
Milina fanapoahana tifitra vy
Steel Shot Blasting Machine dia be mpampiasa amin'ny sambo, tetezana, toeram-pitrandrahana, milina, fantsom-pitrandrahana solika, vilanin-metallurgical, fitaovana milina, lalamby, famokarana milina, fanamboarana seranan-tsambo, fitehirizan-drano sy harafesina ambonin-tany hafa.
Easy-Maintainable Milina mandrakizay dia azo namboarina manokana avy any Puhua. Izy io dia iray amin'ireo mpanamboatra sy mpamatsy any Shina. Ny volavolainay dia misy lamaody, mandroso, vaovao, mateza ary singa vaovao hafa. Afaka manome toky anao izahay fa ny kalitao avo lenta Milina mandrakizay dia amin'ny vidiny ambany. Ny vokatra vokarinay any Sina dia antenaina ho lasa iray amin'ireo marika. Tsy manahy momba ny vidinay ianao, afaka manome anao ny lisitry ny vidinay izahay. Rehefa mahita ny teny nalaina ianao dia hahita ny fivarotana farany indrindra Milina mandrakizay miaraka amin'ny fanamarinana CE azo vidiana amin'ny vidiny mora. Satria ny tahirin-tsolika ataonay dia ao anaty tahiry, azonao atao ny mividy fihenam-bidy amin'ny ampahany betsaka aminy. Azonao atao ihany koa ny manome anao santionany maimaimpoana. Manantena ny hiara-miasa aminao.